Wararka - Waa maxay taxaddarrada loogu talagalay ilaalinta iyo adeegsiga baakadaha dahaarka ee aan tollayn lahayn?
Waa maxay taxaddarrada loogu talagalay ilaalinta iyo adeegsiga baakadaha dahaarka ee aan tollayn lahayn?
Xagaaga, shirkado badan ayaa bilaabaya inay adeegsadaan bacaha dahaarka ee aan la tolanayn, gaar ahaan shirkadaha cuntada, maxaa yeelay baakadaha dahaarka leh ee aan tolka ahayn ayaa looga baahan yahay baakadaha cuntada sida caanaha iyo farmaajada. Si kastaba ha ahaatee, cuntada ku hartay gudaha bacda dahaarka ee aan dunta ahayn waxay u nugul tahay ur xun, iyo xirmada dahaarka ee aan tollayn lahayn waa in si joogto ah loo nadiifiyaa. Xidhmada dahaarka ee aan xidhnayn iyo tallaabooyinkeeda qaboojiyaha iyo xaaladaha shaqada ee la xidhiidha. Waa aalad qaboojiye aan la isticmaali karin. Intaa waxaa dheer, marka shuruudaha qaboojiyaha ay aad u adag yihiin, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo xirmo daboolis elektaroonik ah oo u baahan isticmaalka tamarta si loo gaaro qaboojiye sax ah. Taxanaha yar ee soo socda ayaa qof walba u qaadaya si uu u fahmo taxaddarrada ilaalinta iyo adeegsiga baakadaha dahaarka ee aan tollayn lahayn:
Xusuusnow adeegsiga iyo ilaalinta xirmada dahaarka ee aan tollayn lahayn:
1. Fur daboolka sare oo nadiifi oo ku tirtir shukumaan jilicsan ama isbuunyo lagu qooyay biyo diirran ama saabuun dhexdhexaad ah.
2. Ka dib markaad isticmaasho saabuunta, waa in lagu nadiifiyo biyo, ka dibna lagu qalajiyaa maro qalalan.
3. Had iyo jeer ka saar boorka dusha kore ee xidhmada dahaarka ee aan xidhnayn si aad isaga ilaaliso saamaynta bilicsanaanta.
4. Dami xiriirka ololka furan ama goynta aalladda fiiqan.
5. Si looga fogaado soo-gaadhista roobka muddada dheer, huurka, qorraxdu waxay saamayn doontaa saamaynta dahaarka.
6. Baahida nolosha waxay u baahan tahay in la naqshadeeyo cabbirro kala duwan, iyadoo la adeegsanayo baakadaha tiknoolajiyadda dib loo isticmaali karo, baakooyinka barafku waxay qaboojin karaan si ay u ilaaliyaan kulaylka (baakadaha barafka waa la qaboojin karaa -190 ° C, kan ugu sarreeya waxaa lagu kululayn karaa 200 ° C, waa la goyn karaa cabbir kasta).
Boorsada dabooliddu waa wehel wanaagsan iyo kaaliye wanaagsan labada ganacsade iyo macaamiisha shaqsiga ah xilliga jiilaalka iyo xagaaga. Waxaan aaminsanahay in markaan akhriyo qodobbada kor ku xusan, adeegsiga iyo dayactirka xirmada dahaarka ee aan tolmo lahayn waxay noqon doontaa mid la dareemi karo, haddii aad u baahan tahay inaad habayso badeecadaha la xiriira, fadlan la xiriir